Izeluleko Ezimbalwa Zokugembula Okukhulu - Amakhodi Ebhonasi Yekhasino aku-inthanethi
Izeluleko Ezimbalwa Zokugembula Okukhulu
Posted on September 22, 2020 September 22, 2020 Umbhali Andrew	Amazwana Off kwizeluleko ezimbalwa zokugembula
Amakhono nezinhlelo eziningi zokugembula eziku-inthanethi zingathuthukiswa ukusiza ukugembula kwamakhasino nokubheja kwezemidlalo, kepha okuyisisekelo sokuziphatha okuyisisekelo kuzohlala kunjalo. Bheka amathiphu ayisisekelo azokusiza ukuthi ube yimpumelelo yokugembula. Ukugembula ku-inthanethi kungaba yinto ejabulisayo noma engathi sína, kepha kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukuhlasela i-inthanethi ngamasu amaningi wokuhlanganisa, noma ngabe ufisa ini:
Njalo setha imisebenzi eqinile yenyanga yokugembula.
Hlukanisa ukugembula kwakho ngezikhathi zamasonto onke, kukunike isikhathi sokucabanga ngokuwina / ukulahlekelwa kwakho
Gembula kuphela ngemali yokuzilibazisa ojabule ukuyisebenzisa noma ulahlekelwe yiyo
Musa ukukhuphula iziteki ukuxosha ukulahlekelwa!
Sebenzisa amaphesenti amancane ebhange lakho lokudlala ekubhejeni ngakunye, okufana no-1-5%
Ungajahi ukulahlekelwa ngokugembula okungasile
Sebenzisa ukugembula Ukunikezwa kwebhonasi ngokunakekela - bangakunika ukugembula okungenangozi uma uhlakaniphile
Zama izinhlelo zokugembula ezinamazinga aphansi okubheja, uze uthole eyodwa esebenza!
Lezi amathiphu alula kuzokhulisa amathuba akho wesikhathi eside wempumelelo, isikhathi sakho sokugembula ngenyanga futhi sikuvikele ekulahlekelweni yimali ongafuni, noma okubaluleke kakhulu - ukheshi ongeke wakwazi ukukusebenzisa!
Kwabagembuli abayitoho, hlala ukhumbula ukuthi ngenkathi ungafisa ukunqoba okukhulu, ubumnandi kufanele bube senhliziyweni yemisebenzi yakho yokugembula. Ngakho-ke, ukusebenzisa isabelomali esincane kuzosho ukuthi ngeke uthukuthele ngemuva kwezikhathi ezimbi ekhasino noma encwadini yezemidlalo!
Okubaluleke kakhulu, kumgembuli we-inthanethi ojulile, isiyalo nenhloko epholile kubalulekile empumelelweni yesikhathi eside. Ngisho nabadlali bezokugembula abahamba phambili emhlabeni badlula ezinyangeni zokulahlekelwa - kepha baphuma phambili ngoba bahlala bezolile kuze kube izinto ziyajika!
Izinhlobo ezinhle kakhulu zokugembula ku-inthanethi?
Ukukhetha kwakho izinketho zokugembula ku-inthanethi kuzohluka ngokuya ngesifiso sakho sokuzilibazisa / i-hardcore yokugembula nokuthi yini enye, uhlobo lokugembula oludonswa ngokwemvelo. Kodwa-ke, iningi labagembuli liwela ezigabeni eziningana ezichaziwe:
Ukugembula kweJackpot - kufaka phakathi imishini ye-jackpot slot, ama-lottos nemidlalo yasendaweni, ukugembula kwe-jackpot kungaletha izinkokhelo ezinkulu eziyizigidi zamadola, khona manjalo! Kodwa-ke, ukuwina imidlalo ye-jackpot empeleni kuyithuba elingu-100%, kanti ngenkathi abadlali abaningi be-pro kanye nama-staker amakhulu bedlala le midlalo, bahlala beyindawo yokugembula yokuzilibazisa engabizi kakhulu. Uma kungukugembula okuthokozisayo nesenzo esikhulu, esidlalwa kumishini yesitayela seVegas - ungabe usaqhubeka!
Ukugembula kwemidlalo yetafula - konke okwakudala okufana ne-roulette, i-blackjack, i-video poker, i-poker, i-craps baccarat nokunye okuningi, ukushaya amatafula kunxusa bobabili abagembuli be-pro kanye nabadlali abangajwayelekile. Ngokwemvelo, le niche iwukuphela kokukhetha kwangempela kwabagembuli bekhasino abafuna ukushaya amakhasino ngekhono nangendlela ehlelekile, kepha ngemidwebo eyi-ultra-real, izici zokudlala okuzenzakalelayo nempendulo enhle ezinhlelweni eziyisisekelo, amatafula angumbhede oshisayo abagembuli bezokungcebeleka abafuna imivuzo eyinkimbinkimbi.
Slot ukugembula - amandla amakhulu eLas Vegas ayathandeka njengenketho yokugembula online. Amageyimu we-Slot aletha ukugembula okususelwa enhlanhleni, enezingqikithi nemishini ye-nostalgic, ehambisana nemidlalo yangempela ye-Vegas slot kanye nezindawo zakamuva zamavidiyo ezifana neTomb-raider Secret of the Sword. Isizukulwane esisha sabadlali bamageyimu sithanda izikhala zezici zekhonsoli, kanye nokugembula kwabadlali abaningi online okuhlinzekwa yimincintiswano emisha yama-slot.
Ukugembula kwezemidlalo - kude namakhasino, ukugembula ku-inthanethi kubuswa ukubheja kwezemidlalo kwendabuko, okunikeza izimakethe ezingama-24/7 nezinkulungwane zamathuba okubheja nsuku zonke. Njengakuqala, lo mkhakha wokugembula oku-inthanethi unxenxa imakethe enkulu yabadlala ngokugembula abafuna ukuzijabulisa, abahlaseli abaphakathi abangafuna inzuzo nochwepheshe abanzima abafuna ukwenza imali ngokuhlaziya kwabo inkundla yezemidlalo yokugembula.
Noma yikuphi ukugembula okuku-inthanethi kuyindawo yakho eshisayo, qiniseka ukuthi uzulazula mahhala, ukunikezwa kwebhonasi engafaki mali, amabhonasi wokufanisa kanye nolunye uhla lwezinye izisusa zangempela zokugembula mahhala.
Izinketho Zokugembula ku-inthanethi
Ngokuvamile, ukugembula okuku-inthanethi kungahlukaniswa kube yimicucu eminingana ehlukanisiwe kanye nama-sub-niches, kufaka phakathi imidlalo yamatafula ekhasino, ama-lottos, imishini ye-slot, imidlalo ye-parlor, ama-jackpots aqhubekayo kanye nenhlangano ehlukile yokubheja kwezemidlalo. Umehluko omkhulu embonini ubonakala phakathi kwabagembuli be-hardcore pro - nabadlali abahlanzekile abazithokozisayo - bobabili abafisa ukuwina, kepha ngamazinga ahlukene okubheja, isiyalo nokulindelwe (ingasaphathwa eyenhlanhla vs ikhono).
Kodwa-ke, ukwahlukana phakathi kwalezi zinhlobo ezimbili zabadlali bokugembula akuyona into ehlanzekile - enamazinga amaningi wabadlali bamageyimu, njengabagembuli abayitoho abaphambili abadlala ngezinto zekhono lobuchwepheshe, kepha empeleni badlala ngokuzilibazisa. Ukugembula okuku-inthanethi ngakho-ke kuyindlela yokuguquguquka engabunjwa ibe yisifiso somuntu ngamunye - ukuzijabulisa, ukuphumula noma ukudlala ngokungathi sína.
Izinkokhelo zabadlali be-inthanethi
Izinkokhelo zokugembula eziku-inthanethi ziyahlukahluka kakhulu, ngokuya ngezingqinamba, amazinga okubheja, inhlanhla nekhono. Abadlali bebhizinisi abanenhlanhla kakhulu kuwebhu bangenza imali engaphezu kwezigidi eziyi-1 zamadola, ngenxa yesizukulwane esisha semidlalo yokuqhutshwa kwesitayela seVegas eqhubekayo, kuyilapho ama-ins ezingeni eliphansi lezindawo ezincane zingalingana namasenti. Isilinganiso sokukhokhelwa kokugembula kumakhasino siwela esifundeni sama-95-98.5%, siletha impi elungile neqhubekayo kumakhasino. Ngokwemvelo, kwehluke kancane ngokugembula kwezemidlalo - ngokukhokhelwa okuncike ezinkingeni ezithile zomcimbi futhi kuvulekele ukuguquguquka okukhulu.
Banking ukugembula amabhonasi
Kokubili amawebhusayithi ezokugembula ezemidlalo namakhasino ahlala enikeza ama-gamers amabhonasi wemali mahhala wokulanda isoftware yawo noma ukujoyina insiza yawo. Ukunikezwa okuningi kukhululekile ngo-100%, ngaphandle kwesidingo sokwenza idiphozi, yize yonke imidlalo ihleli idinga ukuthengiselana ngaphambi kokukunikeza ukubheja kwamahhala. Sebenzisa amabhonasi ngokuyala futhi ubenze bakusebenzele, kunokukuyenga ukuthi ugembule ngokunganaki!
I-Casino ibhonasi inikeza:
I-140 yamahhala e-BetChan Casino
I-120 yamahhala e-BitStarz Casino
I-140 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-Buzz Casino
I-80 mahhala ama-spins ku-SlotsandGames Casino
I-170 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-Landing Ikhasi le-Casino
I-175 yamahhala e-Casino yekhasi lephromoshini
I-120 yamahhala e-Rules Casino
Konke Kusuka ku-slot game mahhala
I-25 ayikho ibhonasi ye-deposit eCaribic Casino
I-105 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-Playamo Casino
I-105 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi e-Amsterdams Casino
I-25 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino eKroon Casino
I-35 yamahhala e-Boss Casino
I-130 yamahhala i-casino ku-AllIrish Casino
I-15 yamahhala i-casino e-Flamantis Casino
I-85 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-NorskeAutomater Casino
I-60 yamahhala i-casino e-Casino elandelayo
I-140 ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi eBetChan Casino
I-45 yamahhala igodla ibhonasi yekhasino e-RoyalPanda Casino
I-140 i-spin bonus ayikho mahhala ku-Noir Casino
I-70 ayikho ibhonasi ye-deposit ku-WickedJackpots Casino
I-65 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-NoBonus Casino
I-105 yamahhala i-spin casino ku-MrSpill Casino